Wararkii ugu dambeeyay ee rabshadaha Itoobiya iyo in ka badan 60 ruux oo la dilay – Hornafrik Media Network
Wararkii ugu dambeeyay ee rabshadaha Itoobiya iyo in ka badan 60 ruux oo la dilay
By Liibaan Nuur	 On Oct 26, 2019
Waxaa marba marka ka dambaysa circa isku sii shareereysa xiisadaha cakiran ee ka jira dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanada dowlad deegaanka Oromiya, waxaana halkaas ka socda rabshado ay dad badani ku nafwaayeen.
Ilaa 54 qof ayaa saacadihii lasoo dhaafay dhagax lagu dilay, halka 13 kalana ay toogasho ku dileen ciidamada booliiska ee ka howlgala deegaanada ismaamulka Oramia, kuwaas oo isku dayaya in ay xaka meeyaan dibad baxayaasha.
Saraakiil ka tirsan booliiska oo u waramay Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa xaqiijiyay in dabadabaxyada rabshadaha watay ee maalmahaan ka socday dhulka Oramada ay ku naf waayeen ilaa 67 ruux, iyadoo ay rabshadaahii maanta madaxa la galeen maalintii seddaxaad.
Sida uu komishinka booliska deegaanka Oromiya usheegay wakaalada wararka ee routers ilaa hada inta lahubo 67 qof ayaa ku nafwayday rabshdo iyo iskudhacyo maalinkii 3aad galay oo kasocda deegaanada oromada.
Rabshadahan oo markii hore ku bilawday eedaymo uu jawar Mohammed usoo jeediyay dawlada Abiy Ahmed ayaa haatan isubadalay iskudhac qoomiyadeed iyo meelaha qaar mid diimeed.
Dhankakale boqolaal dukaan iyo meherado ayaa dab laqabadsiiyay, waxaana lagubay goobo diimeed oo ay ku jiraan Maajid iyo dugsiyo Qur’aan, iyo goobo kale oo ay ku cibaadeystaan masiixiyiinta.
Jawar Maxamed oo ah ninka sababta u ahaa in ay qarxaan rabshadaha hareeyay deegaanada ismaamulka Oramiya ee dalka Itoobiya oo la hadlay Reuters waxa uu eedeyn u jeediyay Ra’iisul Wasaaraha dalka Abiy Ahmed oo uu ku tilmaamay kaligii taliye.
Jawar Maxamed ayaa sidoo kale sheegay in Abiy Axmed uu Itoobiya ku celinayo halkii iyo nidaamkii ay horay uga dhiidhiyeen shacbiga Itoobiya sida uu hadalka u dhigay oo uu ku sheegay nidaam dhiig miirato ahaa.
Jawar ayaa sidoo kale mar uu la hadlayay Wakaaladda AFP ayaa waxa uu sheegay in uu ku haminayo in sanadka 2020-ka uu u tartami doono xilka Ra’iisul Wasaaraha ee dalka Itoobiya.
Dhinaca kale Booliska Oromiya oo baaritaano amni xaqiijin ah ka sameeyay goobo badan oo ay ka niisado ka mid yihiin kuwaas oo laga soo saaray hub la sheegay in si qar soodi ah loogu xareeyay Kaniisad ku yaalla magaalada Arsi ee is maamulka Oromiya.
Booliska ayaa gacanta ku dhigay 68-qof oo lala xariirinayo kicinta shaqaaqoyinkii ka dhacay caasimadda ismaamulka Oromada ee Adama, duqa magaalada Adama oo warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in dadka la qabtay looga shakisan yahay dilalkii,boobkii iyo goobihii cibaadada ee lagubay.
Waxaana jira kooxo hubaysan oo ka soo ifbaxay deegaanada ismaamulka Oramiya kuwaas oo la magacbaxay Abin iyo Azema, waxayna sheegtaan kooxahaasi in ay yihiin dhashii Axmed guray jabisay!.
Warbaahinta caalamka ayaa aad u hadal haysa aamusnaanta Ra’iisul Wasaare Abiye Ahmed ayadoo rabshado socdaan shacab badana ay dhinteen.
Dbd9643a Dece 401b 9c5f 296b86cd5122
Dani oo khudbad dhinacyo badan taabaneysa ka hor jeediyay baarlamaanka Puntland
Dowladda Federaalka oo gar-gaarkii ugu horeeyay u direysa Beledweyne